Cookies - Sekolin'ny Fiteny Foibe, Cambridge
Cookies dia rakitra an-tsoratra kely izay napetraka ao amin'ny solosainao amin'ny tranokala izay tsidihinao. Ampiasaina be izy ireo mba ahafahan'ny tranonkala miasa, na miasa tsara kokoa, ary manome fampahalalana amin'ny tompon'ilay tranonkala.
Ity tranonkala ity dia mampiasa ireto cookies manaraka ireto:
Ity takelaka ity dia takiana hiditra ato amin'ity tranonkala ity ary hametraka session. Io cookie io dia toa endritsoratra lava sy tarehimarika lava.
Google Analytics Angony ny momba ny fomba fampiasan'ny mpitsidika ny tranokalantsika. Mampiasa ny vaovao izahay mba hanangona tatitra ary hanampy anay hanatsara ny tranonkala. Ny cookies dia manangona vaovao amin'ny endrika tsy fantatra, anisan'izany ny isan'ny mpitsidika ao amin'ilay tranonkala, izay nahatongavan'ny mpitsidika tao amin'ny tranokala sy ny pejy noraisin'izy ireo.
Fitsipika momba ny tsiambaratelo Google Analytics. Afaka misafidy ianao mialà amin'ny Google Analytics.
Ny ankamaroan'ny navigateur web dia mamela ny fanaraha-maso ny ankamaroan'ny cookies amin'ny alalan'ny tranokala. Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny cookies, dia ahitanao ny fomba hijerena izay cookies efa napetraka sy ny fomba fitantanana sy famafana azy ireo www.allaboutcookies.org.